Indlela yokuKhuthaza ukuMkelwa koMntu kwiNkqubo yeNdoda eseZantsi (A10003) | Izisombululo ze-OMG
Aba basebenzi bodwa bayazenzela, bafuna ukusebenza bodwa, kwaye abafuni mntu oza kubagada kodwa kwangaxeshanye, bafuna iindlela zokhuseleko nezokhuseleko ukukhusela ubomi babo. Abasebenzi bayamelana neenguqu, besazisa ngezisombululo okanye inkqubo Ukuqinisekisa ukhuseleko lwabo alunakuba lolwamkelekileyo. Ke ngoko, ngumceli mngeni kwintlangano ukwandisa ukusetyenziswa kwesisombululo somntu omnye. Okwokuqala, kufuneka basuse nayiphi na imiqobo enxulumene nesisombululo somsebenzi omnye kwaye emva koko baya kuthatha amanyathelo okunyusa ukusetyenziswa kwesisombululo somntu oyedwa.
akukho mfuneko yokuba uphathe izixhobo: Uninzi lwabasebenzi olulodwa luziva lunganyanzelekanga ukuba luphathe izixhobo, luya kuchitha ixesha kunye nengqwalaselo yabo. Bacinga nokuba kwenzeka ntoni kwabanye akuyi kwenzeka nabo. Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuba abaphathi babanike ulwazi olupheleleyo nokuba lunokuwunciphisa njani umngcipheko onokubakho onxulumene nabasebenzi bodwa.
Abasebenzi baseLone abazi ukuba basebenzise njani: Isisombululo somntu osebenza yedwa sineempawu ezininzi kwaye yiyo loo nto kunzima kwabanye abasebenzi ukuqonda indlela esebenza ngayo. Ke ngoko, imibutho kufuneka ibonelele ngezikhokelo ezifanelekileyo malunga nezixhobo zabasebenzi ezizodwa zesisombululo.
Uloyiko lokusebenzisa i-alamu ngempazamo: Uninzi lwabasebenzi luyaboyika ukuba iimpazamo zabo ezincinci zinokuvula i-alamu ngakumbi '' indoda phantsi inkqubo '' ke ngoko ke kufuneka babe nako ukuhlengahlengisa isixhobo kwaye basiphaphele isilumkiso xa imisebenzi yaso ngempazamo.
Ukucaphukisa emsebenzini: Abasebenzi bayamelana nokusebenzisa izixhobo kuba becinga ukuba ziya kubacaphukisa ngelixa besenza imisebenzi yabo, yiyo loo nto umbutho kufuneka usebenzise itekhnoloji yakutshanje njengenkqubo ye-ihelp-umntu eyeyona nto incinci yokulandela umkhondo we-GPS emhlabeni echazwe kwicandelo lokugqibela lwenqaku. Ngaphandle kwale mibutho iyakwazi ukuxelela malunga noncedo lwendleko zoncedo lokuba nezixhobo, oko kuthetha ukuba xa bengazisebenzisi izixhobo ezinokubangela ubomi babo.
Ukungathembeki kwesixhobo: Izisombululo zabasebenzi abasebenza bodwa banenkqubo ye-GPS kwisixhobo yiyo loo nto abasebenzi abaninzi besoyikela ukulandela umkhondo ngaphandle komsebenzi. Ke ngoko, kudala ukungathembani kwesixhobo.
Uloyiko lokutshintsha: Yindalo yomntu, sonke siyaluxhathisa utshintsho kodwa nangona nje izibonelelo zithe zaziswa ngokwazisa, kusenokwenzeka ukuba silandele utshintsho. Ngokufanayo, imibutho kufuneka inxibelelane ngokufanelekileyo kwaye izame ukunciphisa uloyiko ekusebenziseni izisombululo ezinxulumene nabasebenzi abodwa.
Banike inxenye ekwenzeni izigqibo:
Ukuba ujonge indawo oza kuyityala imali kwisisombululo somntu oyedwa, ke lithuba elihle lokuthatha igalelo labasebenzi abodwa. Ukuzibandakanya kwinkqubo yokwenza izigqibo kuyakwandisa ukuzibophelela kwabo ekusebenziseni izixhobo. Nangona kunjalo, ukuba sele unazo izisombululo ezinxulumene nabasebenzi abangabodwa unokubabuza ukuba zeziphi izithintelo ezinokubakho abasebenzi abajongana nabo, zinokuthi ziphuculwe njani izisombululo, kunye nolunye uluvo olunxulumene nokwenziwa kwenkqubo.
U qeqesho: Izisombululo zokhuselo zabasebenzi ezize nomsebenzi ziza ngobuninzi bezinto ezizizo yiyo loo nto kubalulekile ukuba umbutho uncede abasebenzi bebodwa ukuba baqonde ukuba zisebenza njani ezi zinto. Ngokwenza oku sinokuthi sinciphise izithintelo ezinokubakho esizichazile apha ngasentla.
Indlela yekherothi kunye nendlela yokubambelela: Ngokusebenzisa le ndlela imibutho kufuneka ivuze abo basebenzisa izixhobo zokhuseleko zabasebenzi ngokufanelekileyo. Kwelinye icala, kufuneka inyanzelise izohlwayo kwabo bangazisebenzisiyo ngokomyalelo. Ukwenza lo mbutho kudala inkuthazo kwabo baqhuba kakuhle kwaye kwangaxeshanye baphoxe abo baphikisana nemigaqo-nkqubo yombutho.
Lungisa isisombululo sakho somsebenzi kunye ne-ihelp-Man phantsi inkqubo:
Ungasazi isisombululo sakho somntu omnye ngokusebenzisa isixhobo esinye esibonelela ngesisombululo esipheleleyo esimalunga nemingcipheko yomsebenzi omnye. Ewe, yinkqubo yayo ye-ihelp-man eyeyona nto incinci yehlabathi yokulandelela i-3G ye-GPS. Kulula ukuthwala abasebenzi bodwa abayi kuziva becaphukisa ngelixa bewuthwele ngexesha lomsebenzi kwaye kwangaxeshanye inentsebenzo esebenziseka lula ekuqondakala lula ngabasebenzi abodwa. Ineqhosha elinye kwisixhobo, umsebenzi oyedwa unokucinezela ngelixa abuphi ubungozi obuya kuthumela isilumkiso kumbutho kunye nendawo. Isenzi sayo esichanekileyo esichanekileyo esimangalisayo siza kuthumela umyalezo kwintlangano xa umsebenzi omnye usiwa kwenye indawo ukuze usindise ubomi bomsebenzi oyedwa ngoncedo lokuqala. Ngaphandle kwalonto, inendlela emibini yokunxibelelana ngelizwi eya kuthi idlale indima ephambili yombutho ukuze unxibelelane nabasebenzi abodwa.
Ukuqukumbela, ukwandisa ukusetyenziswa kwemibutho yezisombululo yabasebenzi eyodwa kufuneka yaphule izithintelo kuqala kwaye emva koko bathathe igalelo labodwa, baqeqeshe, basebenzise ikaroti kunye nendlela yokubambelela ukuqinisekisa ukusetyenziswa kwezixhobo zokhuseleko. Imibutho kufuneka isebenzise izixhobo ezinje nge-ihelp ukuphatha izisombululo zabasebenzi ezizodwa ngokusebenzisa isixhobo esinye esibandakanya zonke izisombululo.
3509 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-5 Namhlanje